How to combine2different ISP ( MPT ADSL and Bagan ADSL ) with squid? — MYSTERY ZILLION
How to combine2different ISP ( MPT ADSL and Bagan ADSL ) with squid?
January 2011 edited January 2011 in Linux Server
---- >Squid Proxy
မတူတဲ့ ISP နှစ်ခု MPT နဲ့ Bagan ကို ပေါင်းချင်လို့။ တစ်လိုင်းစီကို PC တစ်လုံးစီနဲ့ Configuration ချတာတော့ အဆင်ပြေတယ်။နှစ်လိုင်းဆိုတော့ Proxy နှစ်ခုထွက်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။ 192.168.10.1 က MPT , 192.168.10.10 က Bagan
ကျွန်တော်က နှစ်လိုင်းလုံးကို PC တစ်ခုတည်းမှာတင်ပီး Proxy တစ်ခုတည်းပဲ ထွက်ချင်တယ်။ Squid မှာ ဘယ်လို Multi instant လုပ်ရမလဲ အသေးစိတ်မသိလို့ ကူညီပါဦး။
PS; MPT က login ၀င်ဖို့အတွက်လည်း လိုပါတယ်။ အဲ့အတွက်လည်း ကူညီစဉ်းစားပေးပါဦး။ ကျွန်တော်လည်း တိုင်ပတ်နေလို့ ...
hay... will u upload or send me your squid.config file for MPT adsl. thanks.. <br> or<br>send to my mail marnamoehtet(at)gmail(dot)com. thanks.<br>
အင္း ... ကၽြန္ေတာ္လဲ MPT fiber (username , password) နဲ ့တိုင္ပတ္ေနတယ္ဗ်ာ
squid server ေရာ client ေတြပါ နက္ရပါတယ္ ။ ၿပႆနာက server ကို login ၀င္ရ
တာပဲဗ် ။ server ကို login မ၀င္ရင္ နက္ မထြက္ဘူးၿဖစ္ေနတယ္ ။ ဒီေတာ့ server
မွာေမာ္နီတာၾကီးတပ္ၿပီး login ၀င္၀င္ေနရတာပဲဗ်ာ .....
အင်း ... ကျွန်တော်လဲ MPT fiber (username , password) နဲ ့တိုင်ပတ်နေတယ်ဗျာ
squid server ရော client တွေပါ နက်ရပါတယ် ။ ပြဿနာက server ကို login ၀င်ရ
တာပဲဗျ ။ server ကို login မဝင်ရင် နက် မထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ဒီတော့ server
မှာမော်နီတာကြီးတပ်ပြီး login ၀င်ဝင်နေရတာပဲဗျာ ..
October 2012 Administrators
@IPMan ကီးဘုတ်မရှိလည်း ရိုက်လို့ရအောင် JS Keyboard လေး ထည့်ထားပေးပြီးသားပါ ဇော်ဂျီနဲ့လက်မခံပါဘူးခင်ဗျာ ဘာသာပြန်ပေးထားတော့ @chawbunor ကျေးဇူးတင်ပါသည်